‘देउवा–पौडेल फेक हुन्, हामी हौ असली कांग्रेस’ Bizshala -
‘सत्ताबाहिर बस्नै नसक्ने, रोएर कराएरै भए पनि सत्तामै टाँसिरहनुुपर्ने ! सत्तामा बसेपछि जनता बिर्सने, छोरी ज्वाइँ, भाञ्जाभाञ्जी र सम्धीहरुको मात्र हित हेर्ने । यस्तो पनि कांग्रेस हुन्छ ?’ कुनै बेला नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भइसकेका नेता तथा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रिय सुशीलमान शेरचनले नयाँ बानेश्वरस्थित संसदभवन छेउकै चौकमा माइक समातेर कड्किदै भने–‘शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलहरु भाषण मात्र मीठो गर्छन् । उनीहरु यो देशकै ठूला भ्रष्ट नेता हुन् । उनीहरु नेतृत्वको कांग्रेस लोभीपापीको झुण्ड मात्र बाँकी रह्यो अब । सिद्धान्त पोलेर खाइसके, जता–जता पैसा छ, त्यता मात्र नेताको ध्यान छ । यस्तो पनि कांग्रेस पार्टी हुन्छ ?’
‘राजनीतिमा लिगेसी बिर्यको होइन, विचारको हुनुपर्छ ।’
पर्रर ताली पड्कियो । सर्वसाधारणहरुको समेत बाक्लो उपस्थिति रहेको राष्ट्रवादी पार्टीहरुको गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरिरहेको नेता शेरचनले थपे–‘देउवा नेतृत्वको पार्टी कांग्रेस नै होइन, त्यो फेक हो । वीपी कोइरालाको सिद्धान्तको अक्षरंश पालना गरी उनले देखेको सपना पूरा गर्ने हामी मात्र असली कांग्रेस हौं । अरु त कांग्रेसको नाममा देशलाई बेचिखाने भ्रष्ट र दलालहरु हुन् ।’
फेरि तालीको गडगडाहट सुनियो । पटक–पटक तालिको समर्थन पाउँदै भाषण गरिरहेका शेरचन हालै गठित नेपाली कांग्रेस वीपीका महामन्त्री हुन् । नेपाली कांग्रेसको गलत रबैयाबाट दिक्क भएका इमानदार कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागितामा नेपाली कांग्रेस वीपी गठन भएको शेरचनको दाबी छ ।
नेपाली कांग्रेस वीपीले जन्मिएलगत्तै आगामी निर्वाचनमा काठमाण्डौ १ लगायत देशका केही क्षेत्रमा भाग लिँदैछ । करुवा चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको यो पार्टीलाई डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको राप्रपा राष्ट्रवादीले समेत साथ दिएको छ ।
सोमबार साँझ बानेश्वर चौकमा नेपाली कांग्रेस वीपी र राप्रपा राष्ट्रवादीले संयुक्त चुनावीसभा गरे । पहिलो चुनावी सभामा सहभागीहरुको संख्या निकै ठूलो थियो । उत्साहजनक सहभागिता देखेर दुवै पार्टीका सभापति र अन्य नेता समेत उत्साहित देखिन्थे ।
नेपाली कांग्रेस वीपीका सभापति हरिवोल भट्टराई काठमाण्डौ निर्वाचन क्षेत्रनम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार छन् । उनैको चुनावी अभियानको सुरुवात तथा आफ्ना एजेण्डा र धारणा सुनाउन दुवै पार्टीले संयुक्तसभा गरेका बताइएको छ ।
सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेता शेरचनले बाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका अधिकांश नेता भ्रष्ट भएका आरोप लगाए । उनले देउवादेखि प्रचण्ड र ओलीसम्मले कुन–कुन देशमा बैंक खाता खोलेर कति पैसा कालोधनको रुपमा जम्मा गरेका छन् भन्ने रेकर्ड आफूहरुसँग रहेको दाबी गर्दै निकट भविष्यमै त्यसलाई जनतामाझ सार्वजनिक गरिने उद्घोष गरे । उनले गणतन्त्रका नाममा धेरै राजाहरुलाई पाल्दा राज्यकोष कमजोर भएको भन्दै मुलुकमा सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था आवश्यक रहेको दाबी गरे । वीपीले ‘राजासँग घाँटी जोडे देशको भलो हुन्छ’ भनेको कुरा स्मरण गर्दै उनले राष्ट्रिय एकताको प्रतिक राजसंस्था मात्र हुनसक्ने जिकिर गरे ।
‘यो पार्टीलाई अहिले युरोपियन युनियन र विदेशबाट पैसा आएको छ । यहीकारण स्थानीय निर्वाचनपछि अहिलेसम्मको छोटो अवधिमै यो पार्टीले ८ करोडको त पार्टी कार्यालय मात्र खरीद गरेको छ ।यति छोटो अवधिमा यति धेरै पैसा कहाँबाट आयो ?
नयाँ एजेण्डासहित केही परिवर्तन गर्छौ भनेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको विवेकशील साझा पार्टीलाई उनले ‘विदेशशील पार्टी’को संज्ञा दिए । ‘यो पार्टीलाई अहिले युरोपियन युनियन र विदेशबाट पैसा आएको छ । यहीकारण स्थानीय निर्वाचनपछि अहिलेसम्मको छोटो अवधिमै यो पार्टीले ८ करोडको त पार्टी कार्यालय मात्र खरीद गरेको छ ।’ उनले थपे–‘यति छोटो अवधिमा यति धेरै पैसा कहाँबाट आयो ? अहिले चुनावमा यो पार्टीले पैसाको खोलो बगाएको छ, त्यो पैसा कहाँबाट आयो ? कुरा प्रष्ट छ । विदेशीको पैसा राजनीति गर्नेहरुले देश र जनताको भलोको बिषयमा सोच्लान् भन्नुु मूर्खता मात्र हो ।’
सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा राष्ट्रवादीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सनातन हिन्दूू राष्ट्र र राजसंस्था पुनस्थापनाको लाइन मिलेकोले आफूहरुले कांग्रेस वीपीसँग एकता गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘अहिले हामी एकअर्कालाई सघाउँछौ ।’ उनले भने–‘चुनावपछि हामी एक भएर अगाडि बढ्छौ । हाम्रो यो गठबन्धन राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक गठबन्धन हो ।’
उनले समेत मुलुकमा ठूला भनिएका दलका नेताहरु ‘भागशान्ति जयनेपाल’ भन्दै लुट र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका आरोप लगाए । ‘जनताले तिरेको करमा समेत यहाँ ब्रम्हलुट हुन्छ । ठूला दलका नेताहरु मिलेर देशलाई रित्याइसके ।’ उनले थपे–‘संसद अत्यन्त कमजोर छ, मौलाउँदो भ्रष्टाचारको बिषयमा कोही बोल्दैन त्यहाँ, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिएको छ, देश बर्बाद भइसक्यो ।’
उनले अहिलेको समयलाई ‘भ्रष्टाचारको युुग’को संज्ञा दिंदै यस्तो समयमा काठमाण्डौ १ मा कांग्रेस वीपीका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार हरिवोलजस्ता सादा र नैतिकवान नेता पाउन गाह्रो रहेको दाबी गरे । उनले हिम्मत र इमान भएकै कारण हरिवोल भट्टराईलाई आफ्नो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ समर्थन गरेको प्रष्ट्याए ।
नेपाली कांग्रेस वीपीका सभापति तथा काठमाण्डौ १ नम्बर क्षेत्रका प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेद्वार हरिवोल भट्टराईले धन र डनको राज्य स्थापित भएको दाबी गर्दै पहिलाको कांग्रेस नक्कली भइसकेको ठोकुुवा गरे । ‘वीपी कोइरालाले कल्पना गर्नुभएको नेपाली कांग्रेस देउवा र पौडेलले चलाएको पार्टी होइन ।’ उनले भने–‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद तथा जनताको जनजिविकाको सवालमा प्रत्यक्ष सरोकार र चिन्ता राख्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस वीपी मात्र हो।’
‘के वीपीले घूस खान सिकाएका थिए ? सत्तामा पुुगेपछि भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भनेर सिकाएका थिए ? सत्तामा पुुगेर आफन्त र नातागोताको हित मात्र हेर्नुपर्छ भनेर सिकाएका थिए ?’
उनले देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र त्यसका अधिकांश नेताहरु भ्रष्टाचार, कमिसनमा लिप्त भएका, विदेशीको सामुु लम्पसार हुने गरेका, देशको बिषयमा केही निर्णय लिनुुपर्दा राजदूतहरुको कुरा मात्र सुन्ने गरेका दाबी गर्दै अगाडि भने–‘कांगे्रसले वीपी र उनको सिद्धान्तलाई पोलेर खाइसक्यो, अब वीपीको सपना हामी पूरा गर्छौ ।’
उनले कांग्रेस नेताहरुलाई प्रश्न गर्दै भने–‘के वीपीले घूस खान सिकाएका थिए ? सत्तामा पुुगेपछि भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भनेर सिकाएका थिए ? सत्तामा पुुगेर आफन्त र नातागोताको हित मात्र हेर्नुपर्छ भनेर सिकाएका थिए ? वीपीले स्वाधीन देशको परिकल्पना गरेका थिए, तर नेपाली कांग्रेसँग त्यो ल्याकत र नैतिकता नै बाँकी रहेन ।’ उनले वीपीको विचार र सिद्धान्तभन्दा ठीक उल्टो बाटोमा कांग्रेस हिडेको दाबी गर्दै भने–‘यस्तो पार्टीलाई अब पनि नेपाली कांग्रेस नै भन्ने ? असली कांग्रेस हामी हौ । इमानदार र वीपीको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध कांग्रेसीहरुको पार्टी नेपाली कांग्रेस वीपी मात्र हो ।’
उनले नेपाली कांग्रेसमा टिकटको समेत किनबेच भएको प्रसंग कोट्याउँदै देउवासँग कुनै दृष्टिकोण नै नरहेको टिप्पणी गरे । कांग्रेसले विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गरेको दाबी गर्दै भट्टराईले काठमाण्डौ १ मा कांग्रेसबाट चुनाव लडिरहेका प्रकाशमान सिंहलाई जिताउनुको कुनै अर्थ नभएको बताए । ‘गणेशमान सिंहको लिगेसीको कुरा गरिन्छ यहाँ ।’ उनले थपे–‘राजनीतिमा लिगेसी बिर्यको होइन, विचारको हुनुपर्छ ।’ उनले आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस वीपीले भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध देशव्यापी अभियान नै संचालन गरेर अगाडि बढ्ने उद्घोष समेत गरे ।